लकडाउनमा खुलेका पुरुष- विचार - कान्तिपुर समाचार
अहिलेका सहरिया महिलाहरू प्राय: जागिर वा कुनै व्यवसायमा संलग्न छन् । उनीहरूले जागिरसँगसँगै घर अनि बालबच्चा सम्हाल्दै भान्सासम्म भ्याउनुपर्ने चुनौती छँदै छ । गाउँघरका महिलाहरू त झन् बिनापारिश्रमिक १८ घण्टा काम गर्ने घरेलु मजदुर नै भए । न उनीहरूको कामको मूल्य छ न अस्तित्वको नै । अझै पनि पुरुष अहम्ले महिलाको पनि शरीर हो, मन हो थकाइ लाग्छ र अनेक चाहना हुन्छन् भन्ने सोच्दैन । यस्तो लकडाउनको समयमा आराम गर्ने, अध्ययन गर्ने या श्रीमान्‌का हातबाट बनेका मिठामिठा परिकारहरू खान कहिले पाउने ? यो युगमा पनि विवाह नामको संस्थाबाट पुरुषले महिलालाई आरामसँग शोषण गरिरहेकै छन् र महिलाहरू मिसिनजस्तै चुपचाप ‘फ्री’ मा काम गर्ने घरेलु मजदुर भइरहेकै छन् । तर कहिलेसम्म ? प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०९:२३